चक्र बास्तोलाः गुटभन्दा माथि र व्यवहारिक राजनीतिज्ञ
चक्र बास्तोला थिए कोइरालाहरूका विश्वासपात्र । बीपी कोइरालाले धेरै महत्वपूर्ण, च्यालेन्जिङ जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा पनि काम फत्ते गरेर आउने । बीपीले भनेका थिए सुशील र चक्रमा क्रान्ति सफल पार्ने र पार्टी हाँक्ने सम्भावना छ ।
बीपीले पत्याएका चक्र बास्तोलालाई गिरिजाप्रसादले पनि राम्रै गरी पत्याउँथे । कुरा २०५६ को आमचुनाव अघिको हो । चक्रप्रसादलाई फोन गरेर बिहानै भेट्न डाकेछन् गिरिजाप्रसादले । बोलाएको समयभन्दा आधा घण्टा ढिलो चक्र बास्तोला पुगेछन् । गिरिजाप्रसाद बाहिर निस्कन लाग्दै थिए, बास्तोला ठिक्क पुगे ।
गिरिजाप्रसादले भने, ‘यार, चक्रजी चुनाव त जित्नुपर्छ । कसरी जित्ने आइडिया सोच्नुस न ।’
‘के चुनाव जित्ने खोइ ? जनताले दिएको बहुमत आफँैले ढालेर मध्यावधि गराउनुभयो । त्यसपछि ६÷६ महिनामा सरकार बने । यो व्यवस्थाप्रति अनि हाम्रो पार्टीप्रति जनताको विश्वास बढेको देख्दिनँ,’ चक्र बास्तोलाको जवाफ थियो ।
अनपेक्षित जवाफ पाएपछि गिरिजाप्रसाद चकित भए र फेरि भने, ‘अब के गर्ने त ?’
चक्रको जवाफ थियो ‘विगतका केही त्रुटिहरू सच्याउने ।’
पार्टी सभापति तपाईं हुनुहुन्छ तर यतिबेला तपाईं धेरै आलोचित पनि हुनुहुन्छ । विपक्षीले गिरिजाप्रसादले बहुमत थेग्न सक्दैन भन्छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा किसुनजीलाई घोषणा गरेर जाऔं । किसुनजी पार्टी संस्थापक पनि, एउटा सेन्टिमेन्ट पनि बढ्छ ।’
‘किसुनजी भेट्न र कुरा गर्न मान्छन् त ?’
‘एकपटक प्रयत्न गरौं त म ?’
‘ओके गर्नुस् ।’
चुनाव गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद । माओवादी द्वन्द्वको बेला थियो र दरबारले शाही सेनाको सूचना भन्दै चुनाव हुन नसक्ने भनेर चुनाव रोक्न खोज्दै थियो । यतिसम्म कि चुनावी प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि हेलिकप्टर किन्न पनि दरबारले रोकेपछि प्रहरी प्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलले हेलिकप्टर भाडामा लिन सुझाए । पछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले २ करोड रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका थिए ।
गिरिजाप्रसादसँगको कुराकानीपछि बास्तोलाले सल्लाह गरे पार्टी महामन्त्रीद्वय तारानाथ रानाभाट र बासु रिसालसँग । गिरिजाप्रसाद र किसुनजीलाई भेटका लागि वातावरण बनाउनु थियो । पटक– पटक कुरा गर्दा पनि किसुनजी गिरिजाप्रसादसँग भेट गरेर कुरा गर्नै नमान्ने । पार्टी कार्यालयको ढोकै छेउमा महामन्त्री रानाभाटले क्वाँक्वाँ रुँदै किसुनजीलाई भनेछन् ‘हामी चैँ तपाईहरूलाई हेरेर राजनीति गर्ने, तपाईंहरू चँै एकापसमा संवाद नै गर्न नमान्ने ? अनि कसरी चल्छ पार्टी ?
किसुनजीले भनेछन्, ‘मलाई गिरिजाबाबुको विश्वास लाग्दैन ।’
‘के गर्दा विश्वास लाग्छ त ?’
‘एक्लै त जे पनि भन्छन्, त्यो पालना गर्दैनन् । साथीभाइले सुन्नेगरी सबैलाई साक्षी राखेर गिरिजाबाबुले कमिटमेण्ट गर्नुपर्छ ।’
‘ल, हामी त्यो वातावरण बनाउँछौं ।’
रानाभाट र बास्तोलाले फेरि सल्लाह गरे र किसुनजीले भेटेर कुरा गर्न मानेको कुरा भन्न बास्तोला गए प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादसँग । गिरिजाप्रसादले किसुनजीसँगको भेटको लागि समय र ठाउँ मिलाउन एकपटक आफैं किसुनजीसँग भेटेर आउन बास्तोलालाई भने । बास्तोला किसुनजीलाई भेट्न जाँदा फेरि किसुनजीले अर्काे अड्को थापे, ‘साथीभाइ सबैको सामु किसुनजी भावी प्रधानमन्त्री भने पनि पछि बन्न नदिए को ग्यारेन्टी बस्छ ?’
बास्तोलाले म बस्छु । सबै साथीभाइ बस्छन् भनेछन् ।
फेरि किसुनजीले भने, ‘आरे यार बास्तोलाजी, त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? लु गिरिजाबाबुले चुनाव लड्नु हुँदैन भने म पत्याउँछु । गिरिजाबाबुलाई चुनाव नलड्न राजी गराउनुस् ।’
पार्टी सभापति चुनाव नलड्ने ? यसको सन्देश कस्तो जान्छ ? के निहुँ खोज्ने कुरा मात्र गर्नुहुन्छ किसुनजी ? तपाईँहरू मिल्दामात्र पार्टी, प्रजातन्त्र र देशको भविष्य राम्रो हुन्छ । एकअर्काप्रतिको निषेधको राजनीति नसोच्नुस् । हामी सबै तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि परेका छौ । तपाईं जहिल्यै शङ्का गरेर मात्र बस्ने ?’
‘उसो भए अलिक शान्त ठाउँमा भेटघाट गराउनुस् ।’ किसुनजीले रसिलो पारामा भनेछन् ।
चक्र बास्तोलाले फोन गरे गोदावरी भिलेज रिसोर्टका उनका पुराना मित्र श्रीधर जोशीलाई । गिरिजाप्रसाद र किसुनजीको भेट त्यही रिसोर्टमा भयो । बास्तोलाले भावी प्रमको रूपमा अघिल्लै दिन आश्वास्त पारेपछि किसुनजीले साक्षीको रूपमा अन्य कोही राखेनन् । साक्षी बस्न गएका दुई महामन्त्री, डा. रामशरण महत, चक्र बास्तोला, महेश आचार्यहरू बाहिरै बसे । के कुरा भयो थाहा भएन । साक्षीहरूले भने, ‘दुई बुढाहरू बसेर केके सल्लाह गरे । केही थाहा भएन, यतिमात्र थाहा पायौं कि उनीहरूले १÷१ बोतल बियर चाहिँ खाएछन् ।’
लगत्तैको संसदीय दलको बैठकमा किसुनजी भावी प्रम भनेर गिरिजाबाबुले प्रस्ताव गरे । बैशाख २० र जेठ ३ मा दुई चरणमा चुनाव सम्पन्न भयो । काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो । किसुनजी पर्साबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए र पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । ६ महिनामै किसुनजीको सरकार ढल्यो । त्यसबखत पनि चक्र बास्तोलाले सरकार टिकाउन अनेक प्रयत्न गरे । बहुमत सदस्यले संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव राखे ।
खुमबहादुर, गोविन्दराज जोशी लगायत झण्डै दर्जन मन्त्री पनि राजीनामा गरेर हिंँडे । त्यसबखत गिरिजाप्रसादलाई भेटेर चक्र बास्तोलाले ‘यो काम नगरौं, यसले फाइदा कसैलाई गर्दैन, यो काममा म तपाइलाई साथ दिन सक्दिनँ’ भनेर सम्झाउने प्रयत्न पनि गरे । सँगै रहेकी नोना कोइरालाले भनिन् ‘चक्रजी तपाईं गिरिजाबाबुलाई भोट पनि हाल्नुहुन्न त ?’
‘भोट हाल्ने, नहाल्ने त्यो पछिको कुरा हो । जे गर्न खोजिँदैछ त्यो ठीक छैन ।’
किसुनजीको सरकार ढालिहाल्ने पक्षमा शैलजा आचार्य थिइनन् । नोना कोइराला पनि तत्काल सरकार ढाल्दा घाटा हुने निष्कर्षमा थिइन् भन्ने सुनिन्छ । २०४७ को संविधानमा आफ्ना अधिकार खुम्च्याइएको भनेर दरबार किसुनजीलाई जुनसुकै हालतमा पनि प्रम बन्न नदिने दाउमा थियो भनेर पनि भनिन्छ । किसुनजीले माओवादीसँग वार्ताका लागि अनौपचारिक लबिङ गरिरहेका थिए र सरकार ढालियो पनि भनिन्छ ।
जे होस् इतिहासले अनुसन्धानका लागि छोडेको यो अर्को विषय हो । त्यही ठाउँबाट काङ्ग्रेसको टाउकोमा अर्को रोग थपियो, ‘काङ्ग्रेसले बहुमतको सरकार आफैंले टिकाउन सक्दैन भन्ने’, अलबिदा चक्र दाइ ।